फेमीली तेल गुणस्तरहीन, शिवशक्ति उद्योगमा शिलबन्दी  OnlineKhabar
फेमीली तेल गुणस्तरहीन, शिवशक्ति उद्योगमा शिलबन्दी
घ्यु अनुगमन गर्न व्यवसायीले रोके, प्रशासनले असहयोग गरेपछि टोली फर्कियो
२८ भदौ, बारा । जिल्लाको जितपुरमा रहेको शिवशक्ति उद्योगमा मंगलबार आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शिलबन्दी गरेको छ । विभागले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा अखाद्य तेल उत्पादन गरेर उद्योगले बजारमा बिक्री–वितरण गरेको भेटिएपछि उद्योगमा शिलबन्दी गरिएको हो ।
काठमाडौंबाट आएको विभागको टोलीले उद्योगमा छापा पार्दै अर्को निर्देशन नआएसम्म तेल उत्पादन नगर्न र बजार नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगको उत्पादन फेमीली तोरीको तेल परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन देखिएपछि विभागका शाखा अधिकृत मोहनकुमार पुडासैनीको नेतृत्वको टोली अनुगमनका लागि आएको हो । उद्योगको उत्पादन क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै टोलीले उद्योगलाई तेल उत्पादन र कारोबारमा रोक लगाएको हो । अर्को निर्देशन नआएसम्म उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको अधिकृत पुडासैनीले जानकारी दिए ।
उद्योगले फेमीली र साजन तोरीको तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । गत साउनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले फेमिली तोरीको तेलको स्याम्पल लिएर परीक्षण गर्दा तेलको प्यारेक्साईट भ्याल्यू मापदण्डभन्दा बढी फेला परेको थियो । नियमानुसार प्यारेक्साईट भ्याल्यू १० हुनुपर्नेमा ११ दशमलब ५ रहेको पाइएको अधिकृत पुडासैनीले बताए ।
बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको फेमीली तेल, साजन, धारा र पतञ्जली तेलको परीक्षण गरिएकोमा फेमीली खानका लागि अनपयुक्त देखिएको पुडासैनीले जानकारी दिए ।
गत चैतमा उत्पादन भएको तेल ६ महिनासम्म खान उपयुक्त हुने भए पनि चौथो महिनामा परीक्षण गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन देखिएको शाखा अधिकृत पुडासैनीले बताए ।
उद्योग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद राजकुमार अग्रवाल र व्यवसायी सन्दीप कुमार काडियाको हो ।
अनुगमन टोलीले शिवशक्ति घ्यूमा पनि मिसावट रहेको भन्ने गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्न खोजे पनि उद्योगीहरुले अवरोध गरेका छन् ।
उद्योगीले अनुगमनमा अवरोध पुर्याएपछि विभागको टोली राति हेटौंडा फर्किएको छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहयोग नगर्दा सोचेअनुरुप अनुगमन हुन नसकेको पुडासैनीले बताए ।
२०७४ भदौ २८ गते ९:५३ मा प्रकाशित
तिलोत्तमाको बजेट एक अर्ब ३५ करोड
धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ८० करोड
बर्दिबासको नीति तथा कार्यक्रमः स्वच्छ, समृद्ध र सुन्दर नगर निर्माणको प्रतिबद्धता
कामु प्रधानन्यायाधीशको गुनासो : न्यायपालिकाले पर्याप्त बजेट पाएन
सदाबहार लेख्नुहुन्छ | २०७४ भदौ २८ गते ११:०९
दसैं आएपछि रेडियो टेलिभिजनले “मालश्री धुन” बजाउँछन् भने आपूर्ति, नापतौल, गुणस्तर, उपभोक्ता संरक्षण जस्ता निकायले “अनुगमनको मौसमी धुन” बजाउँछन् ।
‘फेसबुक च्याट’ ले फेला पार्‍यो म्यानपावरका दलाल !
अर्जेन्टिनाः नाइजेरियाविरुद्ध खेल्ने टिम साम्पाओलीले होइन, खेलाडीहरुले तय गर्छन् !
जाका र शाकिरीमाथि फिफाले थाल्यो अनुसन्धान
संसदीय समितिको सभापतिमा कांग्रेसले खोज्यो भागवण्डा